IGM: Vatosoa miisa 10.000 nahazo taratasy fanamarinana ara-dalana. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE IGM: Vatosoa miisa 10.000 nahazo taratasy fanamarinana ara-dalana.
A LA UNEACTUALITEEMISSION
IGM: Vatosoa miisa 10.000 nahazo taratasy fanamarinana ara-dalana.
By Nirinaoct 24, 2016, 10:14 0
Miantoka ny sandam-bidin’ny vato sarobidy iray ny fampandalovana azy any amin’ny trano fitiliana. Voafaritra mazava mantsy ny kalitao sy ny mombamomba azy amin’izay fotoana izay ka tsy hisalasala intsony ireo mpividy. Ny IGM na « L’Institut de Gemmologie de Madagascar » ihany aloha hatreto no mbola eken’ny fanjakana Malagasy sy ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny fanamarinana na « identification » ny vato sarobidy eto Madagasikara. Feno folo taona amin’ity taona 2016 ity izao ny IGM. Vatosoa mihoatra ny 10.000 no efa nandalo fitiliana tao aminy ary 2000 eo ny mpanjifa tamin’izany.
Mamporisika ny mpandraharaha na mpividy na mpivarotra amin’ity sehatra ity ny eo anivon’ny IGM mba handefa ny vaton’izy ireo mialohan’ny hivarotana azy. Ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, manana tolotra ho an’ny mpanjifa mila taratasy fanamarinana vita haingana (service express na sur rendez-vous) ny IGM.
Manentana ihany koa ity farany mba hipaika ny vatony satria ambony kokoa ny vidin’ilay vato rehefa voapaika. Nambaran’ny Tale Jeneraliny hatrany fa afaka manome fiofanana mahakasika izany ny ivon-toerana.
Lafo be eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny vato avy eto Madagasikara raha ny kalitao no jerena. Anisan’izany ny saphir, rubis, tourmaline. Ny fidirana amin’ny ara-dalana ihany no lalana tokana ahafahana manondrana izany any ivelany.
Marihina fa handray anjara amin’ny fihaonambe maneran-tany momban’ny vatosoa ny IGM. Fivoriana natokana ho an’ireo mpiantsehatra amin’ny resaka vatosoa ankatoavin’ny iraisam-pirenena izy ity.
Interview: Andrianirina RASOLONJATOVO
Previous PostAMBATOBE : Noesorin’ny fokonolona ny vato nisakana ny lalam-pokonolona nataon’ny fianakaviana iray. Next PostBrunelle RAZAFITSIANDRAOFA: Endrika fiadiana amin’ny tsy rariny ny fitokonana.